IHuawei ibeka iKirin 980, eyona processor yayo inamandla | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Huawei
Kwakuqinisekisiwe kwiiveki ezidlulileyo kwaye namhlanje kuyinyani. I-Kirin 980, iprosesa entsha ye-Huawei ephezulu, ibonakalisiwe kwi-IFA 2018. Uphawu lwaseTshayina luzenzele njengenye yezona zinto zintsha xa kusenziwa iiprosesa. Into eyenzekayo kwakhona ngale modeli, eyokuqala kwihlabathi ukwenziwa kwinkqubo ye-7 nm.
I-Kirin 980 iboniswa njengeyona processor ilungileyo yohlobo Kude kube ngoku. IHuawei isishiya neprosesa enamandla, enobukho obukhulu bobukrelekrele bokusebenza kwaye efuna ukuma kwiiprosesa zeSpapdragon.
Ngamafutshane, IHuawei ibonisa kwakhona umsebenzi omkhulu abawenzayo malunga noku. Basishiya neeprosesa ezinamandla kakhulu, ngokungathandabuzekiyo ezinceda iifowuni zabo zenze umsebenzi omkhulu. Kukho izinto eziphambili kweli lungu litsha losapho lakwaKirin. Siza kukuxelela apha ngezantsi.
2 Yenziwe nge-7nm kunye namandla
3 Iza kufika nini iKirin 980?
Njengoko bekulindelekile, ubukrelekrele bokudlala buye badlala indima eKirin 980. Uphawu lwaseTshayina lubeke obu buchwephesha njengenye yeengongoma eziphambili zale processor. Inendima yokudibanisa zonke ezo zinto zidibeneyo, ikwanika imikhondo kwizicwangciso zexesha elizayo zomenzi waseTshayina.
Iprosesa yonyaka ophelileyo ifake i-NPU (i-Neural Processor Unit) ngekhompyutha, kwaye kulo nyaka bafuna ukuya phambili. Kungenxa yokuba iHuawei ibeka kule meko i-Dual NPU. Enkosi kuyo, isantya sokuphendula sale projekthi siphindaphindekile.
Ngapha koko, isantya yenye yamandla alo mzekelo. Njengoko kuchaziwe luhlobo ngokwalo, le processor intsha iya kuthi yamkele izinto iphindwe kabini njenge-Snapdragon 845 kwaye iphindwe kane nge-A11 isuka kwiApple. Ukwenza ukuba kucace ukuba abanalo umona omkhulu kukhuphiswano malunga noku.
Yenziwe nge-7nm kunye namandla
Sijongene neprosesa entsha ngandlela zonke. Njengoko I-Kirin 980 yiprosesa yokuqala yokusebenzisa itekhnoloji ye-7nm. Obu buchwephesha kuthethwe ngabo ixesha elide, kodwa bekungekho kude kube ngoku ukuba imodeli yokuqala eyenziwe kuyo ifika. Ke yiHuawei ebetha kuqala kule meko.
Amandla kunye nokusebenza kwamandla yenye yezinto ezimbini ezenza ukuba iprosesa ikhanye. I-CPU yenziwe zii-Cortex -A76 cores, ezihamba nemizobo yeGali yeMali-G96. Ngaphandle koko, sinemodem yeKati 21 kuyo. IHuawei ifuna ukuba ibe yiprosesa enamandla, efanelekileyo, eneprosesa ekrelekrele eqhuba ukunxibelelana. Uqwalaselo olusisiseko lwekhonkrithi:
I-2 Cortex-A76 cores enesantya ukuya kuthi ga kwi-2.6 GHz
I-2 Cortex-A76 cores enesantya ukuya kuthi ga kwi-1.92 GHz
I-4 Cortex-A55 cores enesantya ukuya kuthi ga kwi-1.8 GHz
Inkampani ikwabonelele ngedatha ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle kweKirin 980. Enkosi kubo sinoluvo olucacileyo lokulindela. Kuyachazwa ukuba iyakuba yiyo I-75% inamandla ngakumbi kuneKirin 970 kunye ne-58% esebenzayo ngakumbi kunangaphambili. Ukutsiba okukhulu kumgangatho, njengoko ubona.
Ukwaziswa kwe- iprosesa yomfanekiso omtsha. Ndiyabulela kuyo, elona nqanaba liphezulu leenkcukacha liya kuba nakho ukuhlangulwa kuzo zonke iintlobo zeemeko. Nokuba zikwiimeko ezinzima zokukhanyisa, ezinje ngokufota ebusuku.
Iza kufika nini iKirin 980?
Kwezi veki zidlulileyo kutyhilwe ukuba izicwangciso zikaHuawei bezizakubonisa iprosesa entsha kuqala, ngaphambi kokuba iifowuni zayo eziphezulu ziveze intengiso. Iifowuni zokuqala zokusebenzisa i-Kirin 980 ziya kuba yi-Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro. Ezi fowuni zimbini ziya kuphehlelelwa ekwindla yalo nyaka
Ngapha koko, sele iqinisekisiwe ukuba iyakubakho umsitho nge-16 ka-Okthobha kwisixeko saseLondon ukwazisa ezi fowuni zimbini isiphelo esiphezulu. Kwaye zombini ziya kunikwa amandla yiprosesa egqwesileyo eyenziwe luhlobo lwaseTshayina ukuza kuthi ga ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Kirin 980: Eyona processor inamandla yeHuawei ngoku isemthethweni
U-Apple uza kuzisa isizukulwana esitsha se-iPhone kunye ne-Apple Watch ngo-Septemba 12